Gallop site na Heartland nke Equestrian Ireland - IntoKildare
Obodo Thoroughbred, Oge mbu, Ihe Ime
Ụbọchị 3, kilomita 238, kilomita 148
Nsoro: Kildare ruo Louth, site na Westmeath na Meath
atụmatụ: Ọmụmụ Ihe Ọchịchị Irish, Curragh
Nwee obi ụtọ ngwa ngwa, agụụ na ọ funụ nke agbụrụ dị iche iche na njem nlegharị anya ụbọchị atọ a na-atọ ụtọ. Site na ụfọdụ anụ ọhịa ndị pụrụ iche nke ụwa ruo ebe ịta nri ahịhịa ndụ dị jụụ na n'ọgbọ agha ebe ịnyịnya agha wara ụzọ site n'akwụkwọ akụkọ ihe mere eme. Njem a ga-ewetara gị n'obi ịnyịnya nke Ireland, yana ọtụtụ ihe ịtụnanya n'ụzọ.
Ụbọchị 1: Nkeji 31, kilomita 12, kilomita asaa
Ụkwụ na -akụ, obi na -akụsi ike, igwe mmadụ na -aeringụrị ọ getụ - hazie maka asọmpi ahụ.
N'ime nkeji iri abụọ nke ibe gị, ị ga -ahụ ụzọ abụọ kacha mma na Europe: Ugwu na The Curragh. N'inwe mmetụta dị iche, Curragh Military Museum dị nso na -elekwasị anya n'akụkọ ihe mere eme nke mpaghara ahụ na ihe ngosi na -atọ ụtọ nke na -ekpughe ka ejiri ihe ndị a mee ihe maka ma ndị Jekọb na 1686, yana ịnyịnya agha ha, na ndị agha Britain n'oge WWI. Na -aga ebe ịta ahịhịa na -acha akwụkwọ ndụ, mezie nlele gị na -esote Ọmụmụ Ihe Ọchịchị Irish. N'ebe a, anụ ụlọ na -ejikọ ọnụ na -ekiri - ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ha na -emebu - maka nkwenkwe ụgha nke onye guzobere stud, Colonel William Hall Walker. Onye ọchịagha ahụ wepụtara eserese nwa ọ bụla, ọ bụrụ na ọ masịghị kpakpando ahụ, a ga -ere ya. N'ime ebe ngosi nka nke stud, ị nwere ike gụọ chaatị nke nwa ịnyịnya jọgburu onwe ya akpọrọ Onye nwe oke osimiri: "Saturn n'ime ụlọ nke ise ya ... Ịgụ kpakpando ndị ịnyịnya na -adị ka otu nde kilomita site n'akụkụ Ugbo Japan, Walker mekwara ya site n'enyemaka nke onye ọrụ ugbo na -akụ mkpụrụ osisi Tassa Eida si Japan. Ọ bụ ebe mara mma ịhapụ oge.
Ihe Mmasị: Racecourse nke Punchestown, Curragh Usoro ịgba ọsọ, Curragh Military Museum, Ọmụmụ Ihe Ọchịchị Irish & Ogige ndị Japan
Ọ bụrụ na ị nwere oge karịa
Na Goffs, ụlọ ọrụ na -ere ọbara ọbara nke Ireland, a na -ere ahịa ọbara ọbara asatọ n'otu afọ. Ha bụ mmemme na-atọ ụtọ nke juputara n'ike n'ike na oke ịnyịnya. N'ime obodo Kilcullen, Berney Brothers Saddlery, tọrọ ntọala na 1880, bụ ihe ngosi nka pụrụ iche, nka na ihe ọmụma ịnyịnya.
Ụbọchị 2: elekere 2 nkeji 13, kilomita 114, kilomita 71
Nsoro: Kildare ruo Westmeath
Ihe Mmasị: Obodo Kildare, Ihe omuma ihe omuma & ihe nlere, Kilbeggan Racecourse
Malite na obere ọgwụgwọ azụmaahịa na Kildare Village, nnukwu ụlọ ahịa na -emepụta ihe na Ireland, tupu ị na -agba mmanụ na ụfọdụ ndị croissants na Le Pain Quotidien, ebe izizi mbụ na Ireland maka nnukwu agbụ boulangerie.
Ogige ahịhịa na -ama jijiji na -aga n'okporo ụzọ gị na Lullymore Heritage na Discovery Park. Ugbu a ogige ntụrụndụ dị egwu nke nwere nnukwu ụnwụ nri, Walk Biodiversity Walk na Fairy Village, Lullymore bụbu onye mgbapụta na -enweghị atụ. Na mbido narị afọ nke 18, ihe niile gbanwere mgbe e gburu mmadụ niile ewezuga otu onye mọnk, Thomas Foran.
Gaa n'ihu n'okporo ụzọ gị ka ị hụ nnukwu ọwa mmiri - n'etiti 1834 na 1852 ọrụ “ụgbọ mmiri na -efe efe” rụrụ ọrụ na mmiri ndị a, yana ịnyịnya abụọ na -adọkpụ ụgbọ mmiri na ọsọ nke ihe dịka 7mph (ọ were awa 13 iji si Dublin gaa Athy!)
Na -esote ọ bụ Kilbeggan Racecourse, nke Sunday Times kọwara dị ka onye nwere ọmarịcha “na -etinye nnukwu ọsọ ọsọ - dị ka Royal Ascot - na ndò”. Malite na 1840s, nkuzi a nwere ọtụtụ akụkọ ịkekọrịta, kwa - oge ọzọ ị na -etinye nzọ gị, chekwaa echiche maka Onye mmeri Ukwu National nke 1916 onye ga -aga n'ụlọ n'ihi Ista Ista!
Gaa na distillery whiskey kacha ochie na Ireland na Kilbeggan. Akwụkwọ n'ihu iji chọpụta aghụghọ azụmaahịa a, wee chọpụta ma ọ bụrụ na a na -achụgharị distillery. Ma ọ bụ banye na Roche's Pub na Donadea. Mba - ị naghị eche ihe. Ụlọ mmanya a na -eji nwayọọ nwayọọ na -emikpu n'ime mmiri ahụ e wuru ya. Ewubere na 1800, ọ na -emikpu n'ime ihe karịrị otu narị afọ.
Ụbọchị 3: 1 elekere 47 nkeji, kilomita 113, kilomita iri asaa
Ihe Mmasị: Navan Racecourse, Brú na Bóinne, Agha nke Ebe Ndị ọbịa Boyne, Laytown Strand
Isetịpụ ụda nke ọma maka nzọ ụkwụ taa bụ nwayọ na-awagharị gburugburu osisi 5,000 na ifuru na ọmarịcha narị afọ nke 19 nke ụdị Robinson nke Altamont Gardens nke Carlow.
A na -eso isiokwu a mara mma ka ị na -aga n'ihu '' Ogige nke Ireland '', ebe ugwu Wicklow na -ama ifuru na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mara mma. Mana nke mbu, obodo Wicklow nwere akụkọ mkparị dị egwu site na mmalite narị afọ nke 18 na Wicklow Gaol. N'ime ha, akụkọ gbasara ndị a mara ikpe si na Wicklow ebuga Australia, mgbe ụfọdụ naanị maka mpụ izu ohi.
Site na ihe a na-akpọ 'Gates of Hell' laghachi azụ n'obi ịdị jụụ Wicklow na Glendalough, ama ama maka ọdọ mmiri abụọ ya na ikuku ime mmụọ ya. N'obodo ndị mọnk, tụgharịa uche gị n'ihe Glendalough ga-adị ka ọ dị n'oge oke-mgbe ọ bụ ịlaghachi azụ maka ndị mọnk na-achọ udo. Mana ka ị na -awagharị n'ugwu ndị gbara ya gburugburu, chekwaa echiche maka St Kevin onye ịdị jụụ na ịma mma nke dọtara ebe a na narị afọ nke 6. Gaa ije na nsọtụ mmiri n'akụkụ ọdọ mmiri dị n'elu, tupu ị gawa na ugwu ndị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gburugburu nsụda mmiri Poulanass, nke na-eji nwayọ na-efegharị n'elu okwute ahịhịa.
Were onwe gị rie nri n'oge a na -anabata ma dị jụụ nke Vanilla Pod na Kells.
Obodo ThoroughbredOge mbuIhe Ime